July 11, 2021 - Khitalin Media
အောက်ဆီဂျင်ရဖို့ ၁၁ကြိမ် တိတိအကူအညီတောင်းပေမယ့် မရခဲ့ပဲ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားလေး
July 11, 2021 by Khitalin Media
အောက်ဆီဂျင်ရဖို့ ၁၁ကြိမ် တိတိအကူအညီတောင်းပေမယ့် မရခဲ့ပဲ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားလေး အောက်ဆီဂျင်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အကြိမ်ကြိမ် တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့ မရရှိခဲ့ဘဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ WYTU ဗိသုကာတန်း Final Year ကျောင်းသားလေး လက်ရှိမှာတော့ ကိုဗစ် ပိုးတွေ့တဲ့ လူတိုင်းကြုံနေရတဲ့ ပြသာနာတစ်ခုကတော့ အောက်ဆီဂျင် ပျက်လက်နေတဲ့ ဒုက္ခပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. အဲ့ထဲကမှ တစ်ယောက်အပါအဝင် ဖြစ်တဲ့ ဗိသုကာတန်း နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကတော့ အောက်ဆီဂျင် ကို ၁၁ကြိမ်တိတိတောင်းခဲ့ပေမယ့် မရရှိတဲ့ အတွက် အသက်ဆုံးရူံးခဲ့ရတာပါပဲဖြစ်ပါတယ်… အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တတ်အားသရော ပါဝင်လှူတန်းမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေကြပါပြီဖြစ်ပါတယ် အောက်ဆီဂျင်တွေ ပြည်သူတွေ ဆီအရောက်ပို့နိုင်အောင် လှုတန်းပေးနေကြတဲ့ သူတွေလဲ ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်.. ဒီညီငယ်လေးလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးလဲ မကြုံတွေ့ ကြပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.. မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ…. Unicode … Read more
ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့ အသက်၉၂အဖွား
ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့ အသက်၉၂အဖွား ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့ အသက်၉၂အဖွား ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖွားနဲ့ပတ်သက်လို့ မြေးဖြစ်သူက လူမူကွန်ယက်မှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယ်။ “ကိုယ့်ကြောင့်နဲ့တစ်မိသားစုလုံး P ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အသက် 92 အဘွားလဲ ပါပါတယ်။အခုအကုန် recovery ပြန်ဖြစ်ကြပါပြီ။အဓိက က စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ နဲ့အစား ဝင်ဖို့ပါ။အဘွားဆိုရင် အစားမဝင်ပါဘူး။ လုံးဝကျွေးမရဘူး။တစ်နေ့ဌက်သိုက်2လုံး ၊ Ensure နဲ့ ဆန်ပြုတ်3ဇွန်းလောက်ပဲ ကျွေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်က လုံးဝမကျပါဘူး စိတ်မာပါတယ်။ အခုအဘွားက ထူထူထောင်ထောပါပဲ။အစားတွေလဲ ပြန်လိုက်လာပါပြီ။အခုတလော နာရေးသတင်းတွေချည်းဖတ်နေရလို့ အားလုံး အားတက်အောင်လို့ပါ” Unicode ကိုဗဈဖွဈခဲ့ပမေဲ့ ပွနျလညျကောငျးမှနျလာခဲ့တဲ့ အသကျ၉၂အဖှား ကိုဗဈဖွဈခဲ့ပမေဲ့ ပွနျလညျကောငျးမှနျလာခဲ့တဲ့ အသကျ၉၂အဖှား ပဲဖွဈပါတယျ။ အဖှားနဲ့ပတျသကျလို့ မွေးဖွဈသူက လူမူကှနျယကျမှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယျ။ … Read more
သိနျးတဈထောငျတနျ အောကျဆီဂငျြဝယျယူဖို့အတှကျ အလှူလေးမှာ သူကိုယျတိုငျ သိနျး(၂၀) ပါဝငျ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ မလေသံစဉျ
အဆိုတျောမလေသံစဉျကတော့ အနုပညာလောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတညျထားနိုငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို ငယျစဉျတညျးက လုပျကိုငျနခေဲ့တဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခုခြိနျအထိလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာ ရရှိထားဆဲပါ ။ ခုလို အခွအေနတှေမှောလညျး တတျနိုငျသလောကျ သူမအနနေဲ့ လိုအပျတဲ့နရောတှကေို ပါဝငျလှူဒါနျးပေးနတောတှရေ့ပါတယျ ။ အခုလညျး ပွငျဦးလှငျမှာ သိနျးတဈထောငျတနျ အောကျဆီဂငျြစကျ ဝယျယူဖို့ အတှကျ အလှူလေးမှာ မလေက သိနျး (၂၀) ပါဝငျကာ လှူဒါနျးခဲ့ကွောငျး ဝမြှေလာပါတယျ ။ အလှူလေးနဲ့ ပတျသကျပွီးလညျး ” မလေ ခဈြရတဲ့ ပွငျဦးလှငျမွို့လေးမှာ လူတနျးစားမရှေး သကျတမျးစနေ့နေိုငျဖို့ရေးအတှကျ သိနျးတဈထောငျတနျ အောကျဆီဂငျြစကျ ဝယျယူဖို့ မလေတတျနိုငျသလောကျ သိနျး(၂၀) တိတိ ပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ ခုလိုခြိနျမှာ ငှကွေေးတတျနိုငျသော လုပျငနျးရှငျမြားမတ်ေတာဂရုဏာထား၍ … Read more
ကမ္ဘာ့အလှူဒါန အရက်ရောဆုံးနိုင်ငံတွင် မြန်မာက စတုတ္ထနေရာထိ ကျဆင်း
ဗြိတိန်အခြေစိုက် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ Charities Aid Foundation (CAF)က ထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အလှူဒါန အရက်ရောဆုံးနိုင်ငံအညွှန်းကိန်း (World Giving Index)မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေပြီး အရင်က ထိပ်ဆုံးမှာ နှစ်စဉ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ စတုတ္ထ နေရာထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Charities Aid Foundation (CAF)ရဲ့ ခုလိုသတ်မှတ်ချက်ဟာ ငွေကြေးပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်း၊ တပါးသူကို ကူညီခြင်းစတဲ့ အပိုင်း ၃ ပိုင်းနဲ့ တနိုင်ငံချင်းစီက ပျမ်းမျှလူဦးရေ အချိုး အစားပေါ်မူတည်ပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူကာ ထုတ်ပြန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုထုတ်ပြန်တဲ့ အညွှန်းကိန်းမှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့နောက် ဒုတိယနဲ့ တတိ ယနေရာတွေမှာတော့ ကင်ညာနဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေက အသီးသီး … Read more
“ သိနျး(၁၇၀၀)ကြျောတနျဖိုးရှိတဲ့ ကိုယျပိုငျကား ရောငျးပွီး ပွညျသူတှအေတှကျ အောကျဆီဂငျြစကျကွီး ဝယျယူလှူဒါနျးပေးမယျ့ ဆရာတျော ”
“ သိန်း(၁၇၀၀)ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကား ရောင်းပြီး ပြည်သူတွေအတွက် အောက်ဆီဂျင်စက်ကြီး ဝယ်ယူလှူဒါန်းပေးမယ့် ဆရာတော် ” ပြည်သူတွေကို ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ရင် အသက်ရှင်ရတာ အလကားဟုဆိုကာ သိန်း(၁၇၀၀)ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကား ရောင်းပြီး အောက်ဆီဂျင်စက် ဝယ်ယူပေးမယ့် ဆရာတော် အခုပြည်တော်သာက ဖေကြီး စီးနေတဲ့Lexus 570 (2021 Model) US 110000 ကျော်ကျထားတဲ့ သာသနာလိုင်စင်နဲ့ ကားအသစ်ကို ရောင်းပီး ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ Oxygen Plant တစ်ခုလှူဖို့ ခုပဲ ဖေကြီးကလာပြောထားပါတယ်။ကိုယ်တွေလဲ ဘယ်လိုကိုလုပ်ပေးရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။ ဆရာတော်ကတော့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုလုပ်နေသူ၊ကုသိုလ်စိတ်တွေ အဖန်တလဲလဲဖြစ်နေသူ၊သတ္တဝါတို့၏ အကျိုးစီးပွား ချမ်းသာသုခကို ရစေရန် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုကြင်နာ သနားမေတ္တာ ကရုဏာထားကာ စဉ်ဆက်မပြက် ဆောင်ရွက်နေသူကို စိတ်ကောင်းရှိသူလို့ ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ကြပါသည်ဟုလည်း သူ၏စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ အညတရ ဇဝန(ခေတ္တ … Read more
ကွကျဥ မကကျြတကကျြက ပိုအားရှိတာလား ?
ကွကျဥ မကကျြတကကျြက ပိုအားရှိတာလား ? မဟုတျပါဘူး။ ရိုးရိုးကွကျဥပွုတျ တဈလုံးနဲ့ မကကျြတကကျြ ကွကျဥပွုတျတဈလုံးနဲ့ အာဟာရတနျဖိုးတူတူပါပဲ။ အရပျထဲမှာပွောသလို မကကျြတကကျြကမှ ပိုအားရှိတယျဆိုတာ မဟုတျပါဘူး။ ကကျြအောငျပွုတျလိုကျရငျ ပရိုတငျးဓါတျတှပေကျြသှားလား? ပရိုတငျးရဲ့ သဘောက အပူနဲ့တှရေငျပကျြပါတယျ။ အပူနဲ့ မတှလေ့ညျး အစာအိမျ၊ အူလမျးကွောငျးထဲရောကျရငျ ခဖြေကျြပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျက ပရိုတငျးအလုံးကွီးကို သုံးတာမဟုတျပဲ ခဖြေကျြထားတဲ့ အမီနိုအကျဆဈလေးတှကေိုပဲ ယူသုံးလို့ ရတဲ့အာဟာရက အပူနဲ့တှတှေ့မေ့တှတှေ့ကှေ့ာခွားသှားတာ မရှိပါဘူး။ အစိမျးစားရငျရော ? အစိမျးစားရငျတော့ Salmonella ဝမျးကိုကျပိုးပါတတျပါတယျ။ ကကျြအောငျပွုတျ/ ကွျောစားတာကနျြးမာရေးနဲ့ ပိုညီညှတျပါတယျ။ကွကျဥပွုတျတဈလုံးမှာ အသားဓါတျ ၆.၅ ဂရမျပါပွီး စြေးလညျးသငျ့လို့ ဒီလိုအခြိနျမှာ ကိုယျခံအားကောငျးအောငျပိုစားသငျ့ပါတယျ။ကွကျဥတဈလုံးမှာ ကိုလကျစရော ၂၄၀ မီလီဂရမျလောကျပါတတျလို့ ကိုလကျစရောတကျတဲ့လူတှကေ အနှဈစားမယျဆိုတဈနတေ့ဈလုံးထကျ ပိုမစားသငျ့ပါဘူး။ အကာကိုတော့စားနိုငျပါတယျ။ ဒေါကျတာအိအိမငျး … Read more
အောကျဆီဂငျြ စကျရုံတညျထောငျပွီးတော့ မွို့နယျအတှငျး ပေးဝဖေို့ အတှကျ သိနျးပေါငျးထောငျခြီပွီး မတညျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ မိုးကုတျမွို့က မိသားစုတဈစု
အောကျဆီဂငျြစကျရုံတညျထောငျပွီးတော့ မွို့နယျအတှငျးပေးဝဖေို့အတှကျ သိနျးပေါငျးထောငျခြီပွီး မတညျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ မိုးကုတျမွို့က မိသားစုတဈစု ကိုဗဈ တတိယလှိုငျး တှပွေနျဖွဈ နပွေီးတော့ ကိုဗဈ ကူးစကျ ခံရတဲ့ လူနာတှေ၊ အသကျ ရှူကွပျလူနာတှေ၊ ကိုဗဈ ကူးစကျမှု တှကွေောငျ့ သဆေုံးသှားတဲ့ ပွညျသူတှေ လညျး အမြားပွားရှိနတောပါ။ အောကျဆီဂငျြ မရရှိဘဲ အသကျ သဆေုံးသှားသော ပွညျသူတှလေညျးရှိနပွေီး အောကျဆီဂငျြ ဖွညျ့ပေးတဲ့ဆိုငျတှမှော ညခငျးတှအေထိ တနျးစီစောငျ့ ဆိုငျးနကွေရတာပါ။အောကျဆီဂငျြ ဖွညျ့ပေးတဲ့ စကျရုံ အခြို့ဟာ ပုဂ်ဂလိကပွညျသူမြားသို့ အောကျစီဂငျြ ဖွညျ့သှငျးမှု ရပျဆိုငျးရနျ ဆိုတဲ့ ညှနျကွားခကျြကွောငျ့ ရပျဆိုငျး လိုကျကွပွီးတော့ ပွညျသူ အမြားအပွား ဒုက်ခ ရောကျနကွေပါတယျနျော။ယခုမှာတော့ မိုးကုတျမွို့က မိသားစု တဈစုဟာ မိုးကုတျမွို့နယျအတှငျး အောကျဆီဂငျြစကျရုံတညျထောငျထုတျလုပျဖို့ အတှကျ ကပျြသိနျး(၁၀၀၀)တိတိကို … Read more
အဆုပျထဲကို ဘာရောဂါပိုးမှမဝငျနိုငျအောငျ ဘုနျးဘုနျးတို့ အမွဲသောကျနကြေ ဆေးတဈခှကျ
အဆုပျထဲကို ဘာရောဂါပိုးမှမဝငျနိုငျအောငျ ဘုနျးဘုနျးတို့ အမွဲသောကျနကြေ ဆေးတဈခှကျ အဆုပျထဲကို ဘာရောဂါပိုးမှမဝငျနိုငျအောငျ ကာကှယျနညျး။ ရဲယိုရှကျ ၃ – ၄ရှကျခူး၊ ရစေငျအောငျဆေး၊ ဓားနဲ့လှီး၊ဆုံထဲကိုထညျ့၊ အရညျညှပျရတဲ့အထိထောငျး။ပြားရညျစဈစဈတဈဇှနျးထဲ။ ပွီးရငျတဈနနှေ့ဈကွိမျသောကျ။ အဆုပျထဲကို ဘာရောဂါမှ မဝငျနိုငျပါ။ #credit Zawgyi အဆုပ်ထဲကို ဘာရောဂါပိုးမှမဝင်နိုင်အောင် ဘုန်းဘုန်းတို့ အမြဲသောက်နေကျ ဆေးတစ်ခွက် အဆုပ်ထဲကို ဘာရောဂါပိုးမှမဝင်နိုင်အောင် ကာကွယ်နည်း။ ရဲယိုရွက် ၃ – ၄ရွက်ခူး၊ ရေစင်အောင်ဆေး၊ ဓားနဲ့လှီး၊ဆုံထဲကိုထည့်၊ အရည်ညှပ်ရတဲ့အထိထောင်း။ပျားရည်စစ်စစ်တစ်ဇွန်းထဲ။ ပြီးရင်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်။ အဆုပ်ထဲကို ဘာရောဂါမှ မဝင်နိုင်ပါ။ #credit
ဆံပင်ကျွတ်သူ ၊ ဆံပင်နက်ချင်သူများအတွက် အလွယ်ကူဆုံး အိမ်တွင်းကုထုံး
ဆံပင်ကျွတ်သူ ၊ ဆံပင်နက်ချင်သူများအတွက် အလွယ်ကူဆုံး အိမ်တွင်းကုထုံး ၄ခေါက်လောက် အသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင် ၉၅%အကျွတ်သက်သာ မဲနက်သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ယုမွန်အရင်က အစာအိမ်ရောဂါအခြေနေဆိုးလို့ ၂နှစ်လောက် နနွင်းနေ့စဉ် ၁၀လုံးသောက်ရပါတယ် … အဲ့ကထဲက ရှိသမျှ ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာ ထိပ်ပါပြောင်တဲ့အထိပါ…ဆေးနည်းပေါင်းစုံကုခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး … ထိပ်ပါပြောင်ပြီး ဆံပင်တအားကျွတ်လို့ အစခံရတဲ့အထိပါ။ ခုဒီနည်းလေးကို စမ်းသပ်တာ ၄ခါမြောက်မှာတင် ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံပင် ၁၀၀ ကျော်ကျွတ်တဲ့သူက ၅ပင်လောက်ပဲ ကျွတ်တော့ပါတယ် အစက တော်တော်ကို အဲ့ဩခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုရလဒ်ရလာလိမ့်မယ်လို့တောင် ထင်မထားပါဘူး.. ပြီးတော့ မျက်ခုံးကိုပါ လိမ်းတာ မျက်ခုံးမွှေးတွေပါ ပေါက်လာပြီး ထူထဲလာပါတယ်.. ရေရှည်စွဲလုပ်ရင် ဆံပင်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ် ယုမွန်ကတော့ ဆံပင်အသစ်လေးတွေ ပြန်ပေါက်လာပါပြီ။ နည်းလေးကတော့ လွယ်ကူပါတယ် ပစ္စည်း ၂မျိုးသာလိုအပ်ပါတယ် … Read more
ကိုဗဈကွောငျ့ သငျမသခေငျြဘူးဆိုရငျ သခြောဖတျပါ
ကိုဗဈကွောငျ့ သငျမသခေငျြဘူးဆိုရငျ သခြောဖတျပါ အရငျခတျေကလူတှေ ဝမျးလြှောဝမျးကိုကျရောဂါခံစားရရငျ တမွို့လုံး ကူးစကျပွီး သကွေရတယျ။ ဝမျးလြှောဝမျးကိုကျတာကို ဘယျလို ကုရမှနျးမသိလို့ ဖငျက ဝမျးလြှောပွီး ပါးစပျပွနျမဝငျတော့ အားအငျဆုတျယုတျပွီး အစာမဝငျတာတှေ ဖွဈပွီး သရေတယျ။ အခုဖွဈနတေဲ့ ကိုဗဈက လူကို အဓိက တိုကျခိုကျနတောက အဆုတျနဲ့ နှလုံးပဲ။ ကိုဗဈကွောငျ့ အဆုတျနဲ့ နှလုံးကို တိုကျခိုကျဖကျြဆီးခံနရေတဲ့ အခြိနျမှာ မိမိစိတျမှာ စိုးရိမျပူပနျစိတျတှေ မြားလာပွီး ခန်ဓာကနေ ရောဂါတိုကျဖကျြတဲ့ ဟျောမုနျးတှေ ပိုထှကျပွီး အဆုတျနဲ့ နှလုံးကို ပိုပကျြစီးစတေယျ၊ ဒါကွောငျ့ ကိုဗဈဟာ ဘာဆေးနဲ့မှ ကုမရပဲ ဆေးမတိုးတဲ့ ရောဂါဖွဈလာတာ။ ကိုဗဈကို လကျတှေ့ ပြောကျကငျးအောငျ ကုနိုငျတဲ့ ဆေးမပျေါသေးတာလညျး ကိုဗဈကူးခံရတဲ့ တဝကျကြျောမှာ စိုးရိမျပူပနျစိတျတှေ ပိုမြားနလေို့ … Read more